Kugona Kubata Murume Pabonde Kuita Sei? Kugona Kubata Murume Pabonde Kuita Sei?
Kugona Kubata Murume Pabonde Kuita Sei?
Kunzwisisa kuti mese muri vaviri muri kuisana kwete kuti umwe chete ndiye anoisa umwe. Mukadzi anotambawo nhengo yomurume, kupuruzira, kufuridzira, kuyevedzwa nayo, kutaura nezvayo kumurume.
Kupa murume mazamu, magaro, makumbo kuti atambise, kukisa murume muviri wese, asi kumirira kusvika wanyatsonyorova, kubvunza murume kuti anoda kushandisa maitire api. Kana mapinzana kushandisa chiuno kukoirana nomurume, kubatirira murume chiuno chake nokumupa rhythm yakakodzera kuti anonoke kutunda. Kuchemerera zvinoenderana nokunakirwa uchirumirira muviri wemurume. Kana watundawo ipa murume experience yazvo muite mese saka muudze awedzere kukoira uchitunda Iwewo wedzera kushanda kwechiuno.
Kana nhengo yabuda musikarudzi iwe mukadzi kasira kuibata woidzorera mukati wotangazve kukoira murume. Murume ngaazive kuti anonakira mukadzi. Mapedza usangoti zii, udza murume kuti zvanga zvichinaka uye kuti chanyanyonaka chii kuti kana ozowedzera mangwana azive zvokuita. Ratidza kushamisika nokunaka kunoita nhengo yemurume wako. Shamwaridzana nenhengo kana makarara wombundira murume, isa ruoko panhengo yake akakufuratira. Uchaonawo iye oisawo pazamu kana wakamufuratira makarara. Garo kumbira zvinhu zvinoitika, sokuti wokumbira kuti murume akuratidze urume huchibuda munhengo.
Anokwanisa kukukoira mazamu iwe uchikwiza nhengo nemazamu, wobva watoona Tsaa tsaa kubuda kwehurume. Chifarawo kuti zvaitika womutsanangurira kushamisa kwazvo. Musi waunoenda kumwedzi chiti murume akukoire mazamu anzwe parere moyo.